Wasiirka Maaliyadda Somaliland 'Dheddo Roob Noqon Wayday'! + [ Akhriso ]
Thursday February 08, 2018 - 19:19:26 in Wararka by Super Admin
Hargeysa (Ilays-News):- Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda Somaliland Yuusuf Maxamed Cabdi,
oo uu xilkaasi u magacaabay Madaxwyne Muuse Biixi Cabdi ayaa durba qaaday talaabooyin ay dadka wasaaradaasi xidhiidhka la lehi ku tilmaameen in ay yihiin kuwo aan la mahadinin.
Maalmo uun ka dib markii xilkaasi loo dhiibay, Wasiir Yuusuf Maxamed Cabdi ayaa isku bedel ku sameeyay agaasime waaxeedyadda Wasaaradda Maaliyadda, halka uu kuwo kalena xilalkiii ay hayeen ka qaaday.
iyada oo shaqaalaha Wasaaradda dhexdeedu hadal hayntu badan tahay isla markaana lagu mashquulay isku bedelka Agaasime Waaxeedyada oo uu nin waliba dhinac ula baydhay faallada isla markaana loo badiyay in isku shaandhayntu ay ahayd xeelad uu wasiirku kaga aar goosanayo Xubno wakhtigii uu shaqaale Hoosaadka ahaa culays badan ka tirsanayay, ayaa hadana waxa soo baxday Warar sheegaya in uu wasiirku kala diray kooxdii uu ciyaari jirtay wasaaradda Maaliyadda.
Kooxdan ayaa waxa ay ahayd koox dhalinyaro ah oo marka laga yimaado mooraalkooda oo kor loo soo qaadayay, sidoo kalena ka heli jiray shaqo Abuur, hasayeeshee markii dhinac walba qayladu ka timid, lana arkay darjiidhka Wasiir Yuusuf, Waxa uu shaaciyay in uu ka laabtay go’aankiisii hore ee ahaa dhaqaale madhxinta, hasayeeshee ay ka madhayn dhaqaale Kobcintu.
Wargeyska Sahan oo ka soo Baxa Magaaladda Hargeysa ayaa isna boggiisa hore ku soo daabacay in gunnadii la siin jiray Abwaanka Dhulka Ay soomaalidu degto Caanka ka ah Ee Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi laga gooyay mushahaar ay xukuumaddu siin jirtay.
Arrintaasna waxa sii adkeeyay, warbaahintana u sii cadeeyay Hurre Ibraahim Walanwal oo xusay in aanu Abwaan Hadraawi Laba Bilood arag gunnadii uu ka qaadan Jiray xukuumadda, markii ay la xidhiidheen Wasaaradda Maaliyaddana loo sheegay in dib u habayn lagu waddo, hasayeeshee ay weli ka dhursugayaan.
Si kastaba ha ahaatee Wasiirka Maaliyadda Somaliland oo xilka loo dhiibay xilli uu dalka ku dhex dabaalanayo Musuqmaasuq, abaaro iyo Colaad ka jirta Gobolada Bariga Somaliland, ayaa aragtidiisii ku soo koobay Xarunta Wasaaradda Maaliyadda, waxaanu ugaadhsanayaa Shaqaale Hoosaadkii iyo madaxdii Waaxyaha, waxaana dadka aqoonta dheer ulihi ay ku tiraabeen in uu uga gol leeyahay sidii uu u sifayn lahaa shaqaalihii ay isu dhawaayeen wasiiradii ugu danbeeyay ee xilalkaasi, hayay isagana ka horeeyay.
wasaaradaasi hore ayuu ka trisanaa in ay dhex taalay Uttun siyaasadeed, hasayeeshee waxa uu ilawsan yahay in ay dhamaantoodba u yihiin shaqaale hoosaad, keligii amarka ka qaata.
waxaanan ku soo koobi lahaa qoraalkan bayd ka mid ah maansadii Dir iyo Daabac ee uu wakhti hore tiriyay allaah haw u naxariistee Marxuum Maxamed Xaashi Gaariye
Qabiilkii Dorraad yiil
Isticmaarki baa dumay
Shalay daba-ka-naax iyo
Dibitaati baa waday
maantana dillaal iyo
Dibir baa ku xoogsada
Waa dabin qarsoodiya
ummadday ku dagayaan
Boobkay ku dedayaan
Qolo-qoladan loo degey
kama dhalan dadweynaha
Ragga dacarta huriyaa
Waa kooxo duuma ah
maamulkay ku dumanyiin
qaarbaa diktoorra ah
Degreegoodu madhan yahay
Qaarbaa Durbaanna leh
oo daacaddii jaray
Darna waa hagoogtaan
Waa deniyo waaweyn
isku soo dabbaaloo
waa Dabaqad maal jecel
Waxa loo dig lee yahay
Dhididkaygan dahabka ah
Si kastaba ha ahaatee waxa ay bulshaddu dhawraysaa Talaabooyinka uu wax kaga bedeli doono Gedgedoonka Maaliyadeed, Wasiirka Horumarinta Maaliyadda Somaliland.
Isku Soo Wada Duubo Marka aad u Fiirsatay Dhaqdhaqaaqyadda iyo Talaabooyinka uu ilaa iminka Qaaday Wasiir Yuusuf, Miyaanu Xaalku U Muuqanin ‘Dheddo Roob Noqon Weyday’
Source:- SAGAL NEWS